वेद विद्याश्रमलाई हाम्रो शुभकामना ! | eAdarsha.com
कास्की पहिलेदेखि नै शिक्षादीक्षामा ख्याति प्राप्त स्थान हो । शिक्षा दीक्षाका लागि काशी कि कास्की भनेर त्यसै भनिएको होइन । गुरुकुलको परम्परादेखि नै यसले अग्रणी स्थान ओगटेकोले त्यो भनाइ स्थापित भएको हो । आज पनि हामी यताउता हे¥यौं भने पहिले–पहिलेका आश्रम र आश्रमका भग्नावशेषहरु देख्न सक्छौं । केही आश्रम सानो ठूलो रुपमा अहिले पनि चलिरहेको देख्न सकिन्छ । नारायणस्थान आश्रम र चिसाखोला वेद विद्याश्रम निरन्तर चलिरहेका आश्रम हुन् । चिसाखोला वेद विद्याश्रमलाई पहिले मणि भन्ने चलन थियो । त्यो मणि कति पुरानो हो, त्यो अहिले भन्न सकिँदैन । तर त्यो ठाउँ २ हजार सालभन्दा पहिलेको हो भन्ने धेरै प्रमाण छन् ।
नारायणस्थान र चिसाखोला वेद विद्याश्रममा पं. प्रेमचैतन्य ब्रह्मचारीको नाम जोडिएको छ । उनले १९९९ सालतिर ती आश्रममा पढाउने गर्दथे । भारतको अलमोडा स्थानबाट आएर पोखरामा केही महत्वपूर्ण कामहरु गरे । २००७ सालको प्रजातान्त्रिक आन्दोलनमा उनले सक्रिय भूमिका खेलेका थिए । यहाँको शैक्षिक जागरणमा पनि उनको महत्वपूर्ण योगदान छ । उनी २०१६ सालमा गठित राष्ट्रिय सभामा राष्ट्रिय सभाका सदस्य मनोनीत भएका थिए । २०१७ सालमा राजाले ‘कू’ गरेपछि उनी यहाँबाट पलाएन भए । त्यसबेला कतिपय राजनीतिक गतिविधि मणिबाटै सञ्चालन हुने भएकाले त्यो ठाउँ बराबर चर्चामा आउने गरेको थियो । मणिको स्थापना र सञ्चालनमा पं. ऋषिकेशव पराजुली, लक्ष्मीप्रसादलगायत पनि योगदान थियो । त्यसपछि उनीहरुको अनुपस्थितिमा प्रेम चैतन्य ब्रह्मचारीको प्रमुख चेलाका रुपमा रहेका अग्नि होत्री वेदगुरु पं. केदारनाथ उपाध्यायले सञ्चालन गरे ।
पं. तिमिल्सिनाले आजीवन त्यही स्थानमा रहेर आश्रमको उन्नति र प्रगतिमा आफ्नो जीवन नै न्यौछावर गरे । उनले गुरुकुल आश्रमलाई निरन्तरता दिएको मात्र होइन । त्यसको स्तरवृृद्धि गरे । विद्यार्थी संख्या बढाए । आज गुरुकुलको जुन रुप हामी देख्छौं । त्यो उनैको योगदानको प्रतिफल हो । पोखरा चिसाखोला वेद विद्याश्रम पुरानो परम्पराअनुसार व्यवस्थित रुपले सञ्चालन भइरहेको छ । त्यसले सनातन धर्मको संरक्षण पनि गरेको छ । त्यहाँ उत्पादित विद्यार्थीहरु धेरै ठाउँमा फैलिएका र तिनीहरुले रोजगारको अवसर पनि पाएका छन् भन्न पाउनु खुसीको कुरा हो । अग्नि होत्री गुरु तिमिल्सिनाले वेद विद्याश्रमको संरक्षण र संवद्र्धनमा पु¥याउनुभएको अमूल्य योगदानको उच्च मूल्यांकन गरी २०७५ मा उनको सार्वजनिक अभिनन्दन गरिएको थियो । त्यस उपलक्ष्यमा उहाँको नाममा अभिनन्दन ग्रन्थ प्रकाशित गरिएको थियो । अहिले उहाँको स्थानमा उहाँकै सुपुत्र मोहनाथ तिमिल्सिनाले आश्रमको नेतृत्व गरी सञ्चालनको कार्यभार ग्रहण गरेका छन् । योग्य पिताको योग्य पुत्रका रुपमा उनले वेद विद्याश्रमलाई आधुनिक युग सुहाउँदो किसिमले सञ्चालन गरिरहेका छन् र धेरैभन्दा धेरैको सहयोग प्राप्त गरेर वेद विद्याश्रमको नाम चम्काएका छन् । आश्रमको यो रजतवर्ष भएकाले यस उपलक्ष्यमा हाम्रो धेरै–धेरै शुभकामना !